10 Zvino muKesariya maiva nomumwe murume ainzi Koneriyasi, mukuru weuto+ weboka rokuItari,+ semashevedzerwo araiitwa, 2 murume akanga akazvipira+ uye aitya+ Mwari pamwe chete neveimba yake vose, uye aipa vanhu zvipo zvizhinji zvokuvanzwira ngoni+ uye aiteterera kuna Mwari nguva dzose.+ 3 Paawa inenge yechipfumbamwe+ yemasikati akanyatsoona pane zvaakaratidzwa+ ngirozi+ yaMwari ichiuya kwaari, ikati kwaari: “Koneriyasi!” 4 Murume wacho akanyatsoitarira uye, achitya, akati: “Chii, Ishe?” Iyo ikati kwaari: “Minyengetero+ yako nezvipo zvokunzwira ngoni zvakwira sechiyeuchidzo pamberi paMwari.+ 5 Zvino tuma varume kuJopa vanoshevedza mumwe Simoni anonzi Petro. 6 Murume uyu akagamuchirwa nomumwe munhu anonzi Simoni, musukuti wematehwe, ane imba iri pedyo negungwa.”+ 7 Ngirozi yakataura naye payakanga yangoenda, iye akashevedza vaviri vevashandi vake vomumba nomurwi akanga akazvipira kuna Mwari pakati pevaya vaimushandira nguva dzose,+ 8 akarondedzera kwavari zvinhu zvose, akavatuma kuJopa.+ 9 Zuva rakatevera vachiri parwendo rwavo uye vava kusvika muguta racho, Petro akakwira pamusoro pemba+ paawa inenge yechitanhatu kuti anyengetere.+ 10 Asi akanzwa nzara kwazvo. Zvavakanga vachigadzira zvokudya, akaita seabatwa nehope,+ 11 akaona denga richizaruka+ uye chinhu chinenge mudziyo chichiburuka chakaita sejira guru rerineni riri kudzikiswa panyika nemativi aro mana; 12 uye machiri makanga muine zvisikwa zvemarudzi ose zvine makumbo mana nezvinhu zvinokambaira zvepanyika neshiri dzokudenga.+ 13 Inzwi rakauya kwaari richiti: “Petro, simuka uuraye, udye!”+ 14 Asi Petro akati: “Kwete, Ishe, nokuti handina kumbodya chinhu chakasviba nechisina kuchena.”+ 15 Inzwi rakataurazve naye, kechipiri richiti: “Rega kuti zvinhu zvacheneswa naMwari zvakasviba.”+ 16 Izvi zvakaitika kechitatu, uye mudziyo wacho wakabva wakwidzwa kudenga.+ 17 Zvino Petro paakanga achiri kuvhiringidzika kwazvo mumwoyo make pamusoro pokuti zvaakaratidzwa zvaakanga aona zvingarevei, tarira! varume vakatumwa naKoneriyasi vakanga vabvunza imba yaSimoni uye vakanga vamira ipapo pagedhi.+ 18 Vakashevedzera, vakabvunza kana Simoni ainzi Petro akanga agamuchirwa ipapo. 19 Petro zvaakanga achifunga pamusoro pezvaakanga aratidzwa zvacho, mudzimu+ wakati: “Tarira! Varume vatatu vari kukutsvaka. 20 Zvisinei, simuka, buruka pasi uende navo, usingambozenguriri, nokuti ndavatuma.”+ 21 Naizvozvo Petro akaburuka pasi kuvarume vacho, akati: “Tarirai! Ndini wamuri kutsvaka. Mavingei pano?” 22 Ivo vakati: “Koneriyasi, mukuru weuto, murume akarurama, anotya Mwari+ uye anopupurirwa zvakanaka+ norudzi rwose rwevaJudha, akapiwa mirayiridzo yaMwari nengirozi tsvene kuti akushevedze kuti uuye kumba kwake kuti anzwe zvinhu zvauchataura.” 23 Naizvozvo akavati vapinde, akavagamuchira. Zuva rakatevera akasimuka, akaenda navo, uye dzimwe hama dzakanga dzabva kuJopa dzakaenda naye. 24 Pazuva rakatevera, akapinda muKesariya. Chokwadi, Koneriyasi akanga akavamirira uye akanga aunganidza hama dzake neshamwari dzapedyo. 25 Petro zvaakapinda, Koneriyasi akamuchingura, akawira pasi patsoka dzake, akamupfugamira. 26 Asi Petro akamusimudza, achiti: “Simuka; iniwo ndiri munhu.”+ 27 Zvaaikurukura naye akapinda, akawana vanhu vazhinji vakaungana, 28 iye akati kwavari: “Munonyatsoziva kuti hazvisi pamutemo sei kuti muJudha abatane kana kuti aswedere kune mumwe munhu werimwe dzinza;+ asi Mwari akandiratidza kuti hapana munhu wandinofanira kuti akasviba kana kuti haana kuchena.+ 29 Nokudaro ndauya, ndisingamborambi, pandashevedzwa. Naizvozvo ndiri kubvunza zvamandishevedzera.” 30 Naizvozvo Koneriyasi akati: “Mazuva mana apfuura kana tichiverenga kubva paawa ino, ndakanga ndichinyengetera ndiri mumba mangu paawa yechipfumbamwe,+ apo, tarira! murume akanga akapfeka zvipfeko zvinopenya+ akamira pamberi pangu, 31 akati, ‘Koneriyasi, munyengetero wako wanzwiwa uye zvipo zvako zvokunzwira ngoni zvayeukwa naMwari.+ 32 Naizvozvo, tuma vanhu kuJopa unoshevedza Simoni, anonzi Petro.+ Murume uyu ari kugara mumba maSimoni, musukuti wematehwe, pedyo negungwa.’+ 33 Naizvozvo ndakabva ndakutumira vanhu, uye waita zvakanaka kuuya kuno. Nokudaro panguva ino tose tiri pamberi paMwari kuti tinzwe zvinhu zvose zvawakarayirwa naJehovha kuti utaure.”+ 34 Petro akabva ashama muromo wake, akati: “Chokwadi ndinoona kuti Mwari haasaruri,+ 35 asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.+ 36 Akatumira shoko+ kuvanakomana vaIsraeri kuti avazivise mashoko akanaka orugare+ pachishandiswa Jesu Kristu: Uyu ndiye Ishe wevamwe vose.+ 37 Munoziva nyaya yakataurwa pamusoro payo muJudhiya mose, kutangira kuGarireya pashure porubhabhatidzo rwakaparidzwa naJohani,+ 38 yokuti, Jesu wokuNazareta, akazodzwa sei naMwari nomudzimu mutsvene+ nesimba, iye akapota nomunyika iyoyo yose achiita zvakanaka uye achiporesa vose vakanga vakadzvinyirirwa naDhiyabhorosi;+ nokuti Mwari akanga ainaye.+ 39 Isu tiri zvapupu zvezvinhu zvose zvaakaita munyika yevaJudha nomuJerusarema; asi ivowo vakamuuraya nokumuturika padanda.+ 40 Mwari akamutsa Iyeyu pazuva rechitatu akamubvumira kuti aonekwe,+ 41 kwete nevanhu vose, asi nezvapupu zvakafanogadzwa naMwari,+ isu vacho, takadya nokunwa naye+ pashure pokunge amutswa kubva kuvakafa. 42 Uyewo, akatirayira kuparidzira+ vanhu nokupupura kwazvo kuti Uyu ndiye akagadzwa naMwari kuti ave mutongi wevapenyu nevakafa.+ 43 Vaprofita vose vanomupupurira,+ kuti munhu wose anotenda maari anokanganwirwa zvivi nomuzita rake.”+ 44 Petro achiri kutaura pamusoro pezvinhu izvi mudzimu mutsvene wakauya pane vaya vose vakanga vachinzwa shoko.+ 45 Vakatendeka vakanga vauya naPetro vaiva vamwe vevaya vakadzingiswa vakashamiswa, nokuti chipo chepachena chomudzimu mutsvene chakanga chichidururirwawo pavanhu vemamwe marudzi.+ 46 Nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi uye vachikudza Mwari.+ Petro akabva ati: 47 “Pane munhu angadzivisa kushandiswa kwemvura here kuti ava vagamuchira mudzimu mutsvene sezvatakaitawo isu varege kubhabhatidzwa?”+ 48 Naizvozvo akavarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu.+ Vakabva vamukumbira kuti agare kwemazuva akati kuti.